Waa maxay cashuur-hayntu?
Posted by Tranquillus | Feb 4, 2022 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Gelitaanka dhaqangalka ka jarista isha cashuurta dakhligu waxay ka jirtay Faransiiska ilaa 1er Janaayo 2019. Laakiin waa run in, mararka qaarkood, ay yara adag tahay in la helo habkaaga xisaabinta. Maqaalkan, sidaas darteed, waxaan isku dayi doonaa inaan fahamno sida ay u shaqeyso oo dhan, isku day inaad noqoto mid fudud sida ugu macquulsan.
Horta maxaa is bedelaya
Bisha Maajo, sida sanad walba, waa inaad xeraysataa canshuur celintaada adigoo isticmaalaya bogga internetka ee dowladda. Markaa waxaad sheegi doontaa dhammaan dakhligaaga sannadkii hore, laakiin sidoo kale kharashyada qaarkood. Waa kuwan tusaalayaal:
Dakhliga qofka iskii u shaqeysta
Dakhliga hantida ma guurtada ah
Mushaharka naagta ilmahaaga, shaqaalaha guriga, caawimada gurigaaga
Dabcan, liiskani maaha mid dhamaystiran.
Haddii aad shaqeysid, hawlgab tahay ama aad iskaa u shaqeysid, ma sii bixin doontid canshuurta si toos ah. Waa cidda aad u shaqayso ama qasnadaada hawlgabka, tusaale ahaan, kaas oo ka jari doona lacag bil kasta mushaharkaaga ama hawlgabkaaga, ka dibna si toos ah u bixin doona cashuurta. Lacag-jaryadan ayaa la sameeyaa bil kasta, taas oo kuu ogolaanaysa inaad faafiso bixinta lacagaha canshuurta dakhliga sanadka. Qofka iskii u shaqeysta, canshuurta dakhliga waxaa laga goynayaa marka aad ku dhawaaqdo lacagtaada, taas oo ah bil kasta ama rubuc kasta.
Markaad xerayso soo celintaada sanad walba, maamulka canshuuraha ayaa go'aamin doona sicir ku saleysan canshuur celintaada sannadkii hore. Dabcan, waxaad wax ka beddeli kartaa heerkan wakhti kasta haddii aad qiyaasto in aad dakhli ka yar tahay ama ka badan tahay sannadkii hore. Sicirkan ayaa markaa si toos ah loogu gudbiyaa (canshuurta) loo-shaqeeyahaaga (ama qasnadaada hawlgabka ama Pôle Emploi, iwm.).
Shaqaaluhu sida cad wax macluumaad ah ma bixiyo. Waa maamulka cashuuraha oo daryeela oo ku qanacsan inuu si fudud u bixiyo qiime. Marnaba loo-shaqeeyahaagu ma garanayo dakhligaaga kale, haddii aad ka faa'iidaysato. Waxaa jira wadarta sirta. Sicirka ula kac ah ee loo-shaqeeyaha ayaa sidoo kale ah ciqaab.
Laakin, haddii aad door bidayso, waxa kale oo aad dooran kartaa qiime aan shakhsiyan ahayn. Waa suurtagal!
Waa in la ogaadaa in dakhliga qaar aanu ku dhicin xadka cashuurta laga jaray, sida dakhliga raasumaalka ama faaiidada raasumaalka ee caymiska nolosha.
Sida loo xisaabiyo heerka canshuurta haynta
Hababka xisaabinta waa adag yihiin waxaana aad u caqli badan in lagu tiirsado jileeyaha si loo helo natiijada ugu saxsan ee suurtogalka ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaynu ku soo koobi karnaa sidan.
Cadadka cashuurta dakhliga waxa loo qaybiyaa cadadka dakhliga.
Ugu dambayntii, heerkan la gaaryeelay ayaa markaa dib loo eegi doonaa 1er Sebtembar ee sannad kasta sida ku cad caddaymahaaga iyo caqli-galkani markaas ayaa la dabaqi doonaa sannad kasta.
Kiiska gaarka ah ee shaqaalaha xudduudaha ka gudba ee Switzerland
Haddii aad tahay shaqaale xudduudaha ka gudba oo aan deganayn oo aad ka shaqayso gobolka Geneva ama Zurich, tusaale ahaan, oo mar horeba ku dabaqday cashuur-haynta, ma khusayso.
Dhanka kale, haddii aad ka shaqeyso Swizerland, canshuurtaaduna ay tahay Faransiiska, waa inaad si toos ah qayb uga bixisaa maamulka canshuuraha sidii aad horey u bixin jirtay.
Hawlgabka Faransiiska ahaan, cashuur haynta ayaa sida caadiga ah lagu dabaqi doonaa.
READ Furan khadka taleefanka oo waxaad ka heleysaa bixiyaha adeegga internetka ee Faransiiska
Iyo haddii maamulka canshuuraha uu sameeyay lacag dheeraad ah ?
Heerka canshuurta haynta waxaa loo xisaabiyaa si u dhiganta heerka dakhliga. Sidaan horey u soo aragnay, haddii xaaladaadu isbedesho, waxaad haysataa suurtogalnimada inaad wax ka beddesho sicirkan khadka oo aad wax ka beddesho. Maamulka ayaa markaas ku sameyn doona sixitaanka 3 bilood gudahood. Soo celinta cashuurtu si toos ah ayay ugu mahadsantahay caddaynta la sameeyay May kasta. Waa dhamaadka Luulyo ama bilowga Ogosto markaas ayaa laguu soo celin doonaa. Inta lagu jiro muddadan, waxaad sidoo kale heli doontaa ogeysiiska canshuurtaada.
Qandaraasyada wakhti go'an iyo heshiisyada ku meel gaadhka ah waxay sidoo kale ku xiran yihiin canshuur celin. Loo shaqeeyuhu wuxuu isticmaali karaa qiyaasta caadiga ah ee maqnaanshaha gudbinta heerka. Waxa kale oo lagu magacaabi karaa heerka dhexdhexaadka ah ama heerka aan shakhsiyan ahayn. Miisaanka ayaa gacantaada ku jira:
Halkan sidoo kale, waxaad haysataa suurtogalnimada inaad wax ka beddesho onlayn ee goobta canshuurta.
Waxaad leedahay shaqo-bixiyeyaal badan
Canshuurta haynta waxay u shaqeysaa si la mid ah. Runtii, Maamulka Cashuuruhu wuxuu siin doonaa qiime isku mid ah mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaana qiimahan lagu dabaqi doonaa mushahar kasta.
Maamulka canshuuraha ayaa ahaanaya xiriirkaaga kaliya
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, haddii aad rabto inaad beddesho xaaladdaada shakhsi ahaaneed, waa inaad kaliya la xiriirtaa xafiiska canshuurta ee caadiga ah. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu ururiyaa wadarta oo ma beddelo Maamulka.
Markaad wax siiso urur, waxaad xaq u leedahay dhimis cashuureed 66% deeqdaada. Iyada oo laga jarayo isha, tani waxba ma beddelayso. Waxaad ku dhawaaqdaa sannad kasta, bisha Maajo, waxaana caddadkan laga jari doonaa ogeysiiskaaga cashuurta ugu dambeeya ee Sebtembar.
Lacagta tooska ah ee bishiiba waa sida soo socota:
Dakhliga saafiga ah ee la canshuuri karo waxaa lagu dhuftey heerka lagu dabaqi karo
Haddii aad doorato heerka dhexdhexaadka ah, markaa shaxdan soo socota ayaa la isticmaali doonaa:
bixin Heerka dhexdhexaadka ah
In ka yar ama la mid ah €1 0%
Laga soo bilaabo €1 ilaa €404 0,50%
Laga soo bilaabo €1 ilaa €457 1,50%
Laga soo bilaabo €1 ilaa €551 2%
Laga soo bilaabo €1 ilaa €656 3,50%
Laga soo bilaabo €1 ilaa €769 4,50%
Laga soo bilaabo € 1 ilaa € 864 6%
Laga soo bilaabo €1 ilaa €988 7,50%
Laga soo bilaabo €2 ilaa €578 9%
Laga soo bilaabo €2 ilaa €797 10,50%
Laga soo bilaabo €3 ilaa €067 12%
Laga soo bilaabo €3 ilaa €452 14%
Laga soo bilaabo €4 ilaa €029 16%
Laga soo bilaabo €4 ilaa €830 18%
Laga soo bilaabo €6 ilaa €043 20%
Laga soo bilaabo €7 ilaa €780 24%
Laga soo bilaabo €10 ilaa €562 28%
Laga soo bilaabo €14 ilaa €795 33%
Laga soo bilaabo €22 ilaa €620 38%
Laga bilaabo €47 43%
Waa maxay cashuur-hayntu? Febraayo 4, 2022Tranquillus
horeCaqabadda Amniga Internetka ee Faransiiska (FCSC) ayaa soo noqotay: kooxda Faransiiska waxay raadinayaan safiirradooda!
socdaAasaaska habraaca dambiyada